Maxaadan ka Aqoon Xaram Makkah | Jamaame News Network
Sannad walbo waxaa usoo sahay qaato boqolaal kun oo Muslim ah, si ay u gutaan waajibka Xajka amase Cimrada, saa darteed maamulka arrimaha laba Xaram(makkah iyo Mediinah) waxay u diyaariyeen waxii u sahal yeeli lahaa, inay waajibkooda gutaan .
waxaana ka mid ah, waxyaaba Xaramka gudahiisa amase bannaankiisa loogu qabto, waxaana ka mid ah:
1- Xaram Makkah waxaa gudahiisa halkii marba ku dukankaro in gaareysa 2 Milyan oo ruux, iyo 107 qof oo dawaafaaya saacad walba.
2- Xaramka waxaa isku wareejiya Addimaaddiisa 21 mu”addin, mid walbo codkiisa, waxaana imam ka noqda shanta waqti ee salaadaha , 10 imaam maalin walbana u taagan.
3- Maamulka labada Xaram waxaa u shaqeeya in ka badan 3050 shaqaale, kuwasi oo ah, kuwa dadka ka wacdiya, inay ka fogaadaan xumaatada, una leexdaan dhanka wanaagga, iyo waraabinta biyaha Zamzamka iyo habeenta , shaqada iyo shaqaalaha,
4- Maalin walbo , waqtiga xajka, waxaa la isticmaala 840 ton oo Biayaha Zamzamka , waxaana loo qeybiyaa 70313 haan biyo qaboojiso ah, woda yaalla xaramka gudahiisa iyo hareerahiisa debedda ah.
5- Waxaa Xaramka dhex jooga 190 ruux oo ah hagayaal, keli ay shaqadooda tahay inay ka jawaabaan waxii weydiimo ah ee ay qabaan xujaayda amase kuwa cimreysanaaya, waxaa kale oo meesha ka shaqeeya 1000 qofooda oo keli nadaafadda xaramka qaabilsan.
6- Shaqaalaha nadaafadda Xaramka , waxay maalin walbo 5 jeer ,Xaramka mariyaan cadarka Miski loo yaqaan, iyo uunsi aad u woda udgoon.
– Xaramka gudahiisa waxaa ku yaal 12 shaashado(dhalooyinka Tvyada) oo aad u waaweyn, iyo 32 kuwa dhexaad ah, kuwaasi oo ku nidaamka ku woda xiran, kana woda lalansan masaajidka gudahiisa iyo debeddiisa, si ay u hagaan xujaayda, amse ay u xasuusiyaan xajka waxa uu yahay, iyo sida loo gudinaayo waajibaadka xajka.
8- khudbadaha Xaramka oo lagu baahiyo idaacadaha , ayaa waxay ku tarjumanyihiin ilaa shan luqadood, lagana baahiyo Xaramka idaacaddiisa.
9- Xaramka waxaa laga helaa ilaa 12kun oo kursi, ah kuwa leysku riixo oo loogu tala galey dadka aan soconkarin, waayeel, amase cudur amase meel la’, kuwaasi oo lacag la’aan ah, ayna ka shaqeeyaan dad shaqaalo ah, oo dadka ku riix.(inkastoo ay dowladda lacag la’aan sheegto haddana meesha dad badan ayaa xujayda lacag kaga qaato siduu hawshaasi oogu qabto).taasi oo diyaar ah 24ka saacadood ee maalinkii..
10- waxaa kale oo jira 200 oo kursi oo woda koranto ah, oo uu qofka laftisa u kaxeysankaro.
11- waxaa kale oo jira 10 gaari(kuwa golfkaloo is ticmaalo) Xaramka hareerahiisa, isla markiiba qaadeysa ilaa iyo 14 ruux , saacad walbana diyaar ah, sida ay u qaadaan waayeellada iyo kuwa curyaanka ah.
12- Xaramka waxuu leeyahay 5000 oo Babbis(Marwaxado)ku woda dhegsan gidaarrada Xaramka amase sufiitadiisa kasoo laadlaado, si ay u qaboojiyaan dabeesha xaramka gudahiisa, iyo dhulka Xaramka , dhulka xaramka waxaa ku fidsan 30kun oo sajadood oo dhaadheer.
13-Waxuu leeyahay Xaramka 1500 dambiil yeryer, oo xaramka gudahiisa woda yaal, iyo 100 Sanduuq ee waaweyn oo qashinka lagu daadiyo.
14- Xaraamka hareerahiisa waxaa loo sameeyey Marwaxdo firdhiya biyo qabow, sida sheex sheex roobaad ah, kuwana firdhinaaya xujaayda si looga yereeyo kulka qorraxda eek u dul dhaceyso.
15- xaramka gudahiisa iyo debeddiisa ,waxaa laga isticmaalaa 3500 codqaade(samaacado)oo aad heerkoodu u sarreeyo, 656 codweyneeye oo tirida sare ka mid ah, waxay ku yaaliin Xaramka gudahiisa, inta kalena debeddiisa.
16- Xaramka Makkah waxuu leeyahay 138 irrid oo laga galo, kuwaasi oo la kordhiyo mar walbo oo dhismaha la ballaariyo .
17- irridaha Xaramka waxaa jooga rag iyo dumar , woda ilaaliya, soo gelitaanka , iyo ka bixidda, qaar waxay u gaaryihiin, ilaalin cunnada lala gelaayo xaramka gudahiisa, qaarna qalabka uu qofka sito eel ala gelaayo, kuwaasi oo tiro ahaan gaaraaya ilaa 1500 ruux, shaqadoodana ay tahay 24ka saac, si aan kala go’ lahayn, ayna isku woda beddelayaan si joogta ah